Yusuf Garaad: Doodihii Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed - Qeybta Shanaad
Doodihii Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed - Qeybta Shanaad
Dr. Cusmaan Aden Cabdulle, oo ahaa Agaasimaha Bankiga Dhiigga, oo annaga oo arday ah Jaamacadda nagula hadlay ayaa nooga warramay dhibka Bankiga ka haysta keydka dhiigga. Wuxuu nooga warramay xaaladda bukaanka iyo dhaawaca u baahan dhiigga. Isla markasna si baaq ah oo talo weydiin iyo codsi isugu jirta ayuu noola hadlay.
Aniga oo ah Guddoomiyaha ardayda Kulliyadaha Gahayr ee Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed ayaan dhegeysanayay hadalka Agaasimaha, mana ogeyn in aan ka mid noqon doono shaqaalaha Bankiga Dhiigga ee uu Dr. Cusmaan Agaasimaha u yahay.
Markaa ayaan dhowr barnaamij oo wacyi gelin ah anigu ka abaabulay Radio Muqdisho oo marna aan dhakhaatiir ku marti qaaday marna aqoonyahanno kale iyo weliba shacab caadi ah bal waxa ay ka aamminsan yihiin in ay ku deeqaan dhiig.
Halkaas oo la igu siiyay baabuurkii ugu horreeyay oo aniga igu magacaaban laakiin ay Dowladdu leedahay - Gaadiidka Dowladda oo loo soo gaabin jiray G. D. Waxay ahayd FIAT 127.
Markii dadka ka baqaya dhiig ku deeqiddu ay iga badiyeen doodda ah in qofka dhiig bixiyaa uu ka dhaxlo wareer iyo madax xanuun joogta ah iyo daciifnimo, waxay noqotay in aan anigu dhiig ku deeqo.
Shakhsiyaadka aan xusuusto ee dhiigga sida joogtada ah ugu deeqi jiray waxaan soo qaadanayaa dhowr magac oo ka mid ah. Shakhsiyaadkaas qaarkood waxay dhiig ku deeqeen iafartameeyo jeer, qaarkoodna weyba ka badnaayeen.
Waa Dhakhtar Cusmaan Aden Cabdille, oo mararka qaar isaga oo aan dhammaysan saddexda bilood ee ay tahay in qofku uu sugo inta aanuu mar kale dhiig ku deeqin isku dayi jiray in uu dhiig bixiyo. Kalkaaliyayaasha caafimaadka ayaa marmar iska hor taagi jiray haddii ay ogaadaan in aan saddex bilood u dhammaan. Waxaa kallifayay baahida dhiig ee indhihiisa uu ku arkayo, aadminnimada ku jirta iyo mas'uuliyadda uu dareemayo in isagu uu u xil saaran yahay keydka dhiigga.
General Cabdinuur Yusuf oo ka tirsanaa booliiska iyo maamulka Sportiga isla markaasna ahaa Guddoomiye ku Xigeenka Ururka Bisha Cas ayaa isaguna ka mid ahaa dhiig ddeqayaasha heellan. Si joogta ah ayuu mudda dheer u bixinayay dhiig.
Dadka qaar waxay bixin jireen dhiigga Plasma oo ay si joogta ah ugu baahan yihiin carruurta Hemophiliac ah. Ku deeqidda Plasma waa howl ka culus dhiig mar qura la bixiyo oo inta qofka laga qaado dhiig ka badan inta uu awoodo in uu ku deeqo ayaa la geeyaa sheybaarka oo laga soocaa Plasma. Markaas ayaa unugyada cas iyo unugyada cad ee Dhiigga iyo walaxda loo yaqaan Platelets oo ah dhiig-xinjireeyaha la kala soocaa lagalana haraa inta loo baahan yahay. Ka dibna dib ayaa loogu shubaa qofkii ku deeqay. Inta dhiigga la kala soocayo, qofka ku deeqay waxaa suran faleebbo ku shubaysa milan ku sima inta dhiigga lagu soo celinayo.
Dadka Plasma ku deeqi jiray waxay xusuusteydu ii sheegeysaa in uu ka mid ahaa Cali Ugaas Cabdulle.
Mararka qaarkoodna waxaa dhacaysa in haddii muddo aad u kooban dhiigga lagu heli waayo aanuu bukaanku dhinto ama gaaro xaalad aanuu ka soo kaban karin.
Liiska oo aan u maleynayo in uu ahaa tiro ka yar toban mutaddawac, waxaan ka xusuustaa Prof. Shahiid oo lagu dilay qaraxii Hotel Shaamo isaga oo ka qeyb gelaya qalin jebinta arday uu dhakhtarnimo u tababbaray. Isaga iyo macallimiin kale iyo dhakhaatiirtii ay wax bareen waaliddiin iyo madax munaasabadda ka qeyb gashay ayaa la qarxiyay. Waxaa dilay wiil aanay aqoon isaguna aan iyaga aqoon, kana warqabin sida ay dadkaasi muhiim ugu yihiin bulshada Soomaaliyeed.
Allah ha u naxariisto Dr. Shahiid waxaa dhiiggiisa daadiyay nin aan aqoon, aan hubana in isagu uu dhiiggiisa u shubi lahaa haddii uu wiilkaasi xanuunsan yahay oo uu dhiig u baahdo si uu naftiisa u badbaadiyo.
Taxanaha Doodaha Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed ilaa iyo hadda waxaan daabacay shan, welina waan sii wadi doonaa insha Allah. Shantaba waxaad ka heleysaa isla boggan.
Doodihii Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed - Qeybta Koowaad
Waa dood toddobaad ka socotay Xarunta Jaamacadda oo looga hadlay Qabiilka iyo Qaranka.
Doodihii Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed - Qeybta Labaad
Cabdirisaaq Maxamuud Abuukar ayay ku saabsan tahay oo ardayda kala hadlay arrimo ay ka mid yihiin diiwaangelinta ilmaha.
Doodihii Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed - Qeybta Saddexaad
Axmed Maxamuud Faarax oo wax laga weydiiyay biyo la'aan ka taagnayd degaanno uu Buuhoodle ka mid yahay ayay ku saabsan tahay qormadani.
Doodihii Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed - Qeybta Afraad
Cabdiraxmaan Jaamac Barre oo ka hadlay waddaniyadda, Maxamed Shiikh Cusmaan Meykaal oo ka hadlay dhaqaalaha iyo Cusmaan Jaamac oo ka hadlay kheyraadka badda siiba Kalluunka ayaad uga bogan kartaa qorman.
Posted by Yusuf Garaad at 07:22:00